Soosaarayaasha Soo Saarayaasha Korantada Korontada iyo Warshadaha - Warshadaha Shiinaha ee Qalabka Korantada Korontada
Goobta asalka Dongying, Shiinaha Nooca Magaca ShengYu Baaxadda sida macaamiisha u ah sawirrada ama samballada xajmiga ugu sareeya ≤1200mm × 800mm × 400mm Cabbirka culeyska 0.1Kg-120Kg Dusha sare ee dusha sare ee Ra0.8-Ra6.3 Qalabka S Birta birta, Alloy steel, steel Kaarboon, aluminium , naxaas ah iwm. Daaweynta dusha sare saliida dilaaga ah, Balaariska, rinjiga, Maqaarka budada, Polishing, iwm Adeegga OEM & ODM Processing casting wax losting, habka muraayadda biyaha iyo ciida samaynta Qaabka Sawirka 2D ama sawir gacmeedka 3D waa la aqbali karaa, s ...
Qalabka korantada korantada-04
Si aad u aragto hannaanka kabka birta illaa hadda, qiyaaso naftaada inaad ku dul socotid xeebta dhanka badda. Eeg raad-dhaaf cagta aad kaga tagtid ciid qoyan. Cagtaadu waxay noqon doontaa xudunta, aragtida ku hadhsan ciidda waa caaryada cagtaada.
Qalabka korantada korantada-05
Qarniyo badan, isugeyn kala duwan oo ah alaabta ceyriinka ah ayaa la soo saaray si loo soo saaro noocyo kala duwan oo bir ah. Qaar ka mid ah alaabooyinka kabka waxaa loo isticmaalaa matoorada u baahan dulqaad sare ee kuleylka iyo qabowga. Tuubbooyinka birta qaada waa inay iska caabiyaan burburka iyo cadaadisyada sareeya. Qeybaha kale ee kabka waa inay noqdaan kuwa fudud laakiin waara. Codsiyada badan, qaybo waxaa loogu talagalay inay u oggolaadaan saxitaanka saxda ah ee u dhexeeya ballaarinta iyo foosha.
Qalabka korantada korantada-06